HAMAKY AMIN'NY TENY Acholi Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aymara Batak (Toba) Bengali Bichlamar Bicol Boligara Cakchiquel Andrefana Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Cinghalais Cinyanja Dangme Danoà Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Ga Garifuna Goujrati Grika Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Iban Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Isoko Italianina Japoney Kambôdzianina Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Krio Kroaty Kwangali Kwanyama Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mixe Mooré Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Puebla Avaratra) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Norvezianina Nyaneka Nzema Népali Ossète Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Poloney Portogey Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Romanianina Rosianina Runyankore Sango Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tahisianina Tailandey Tamoul Tatar Tigrigna Tiorka Tiv Tlapanèque Tok Pisin Totonac Tseky Tshiluba Tsonga Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Umbundu Venda Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wayuunaiki Xhosa Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa Éwé
Ho simba tanteraka ny hoavin’ny olombelona raha izy samy izy foana no mifampitondra. Havelan’Andriamanitra hitranga ve izany? Tsia. Araka ny hitantsika, dia hofaranany ny fahoriana sy ny fijaliana nisy nandritra ny taonjato maro. Tian’Andriamanitra ho fantatrao fa efa akaiky ny fotoana hanaovany an’izany. Ahoana no hampahafantarany an’izany antsika?
Aoka hatao hoe hitady tranon’olona any amin’ny toerana mbola tsy hitanao ianao ka manontany olona. Mety hatorony anao ny lalana mankany sy ny zavatra ho hitanao eny an-dalana. Rehefa mandeha ianao ka mahita an’ireo zavatra nolazainy dia azonao antoka hoe efa akaiky ilay trano. Toy izany koa no nataon’Andriamanitra. Hazavainy amintsika ao amin’ny Baiboly ny zavatra miavaka hitranga eran-tany alohan’ny hahatongavan’ny farany. Rehefa mahita azy ireny àry isika dia resy lahatra hoe efa tena akaiky ny farany.
Manazava ny Baiboly hoe hisy vanim-potoana miavaka, alohan’ny hahatongavan’ny farany. Hisy zava-mitranga maromaro eran-tany ary mbola tsy nisy hoatr’izany hatramin’izay. Jereo ny zavatra sasany resahin’ny Baiboly.
1. MISY OLANA MANERAN-TANY Mitanisa ny zavatra hitranga eto an-tany ny faminaniana ao amin’ny Matio toko faha-24. Rehefa miaraka miseho izy ireo dia izay no hamantarana “ny fifaranan’ny rafitr’ity tontolo ity” ka “ho tonga ny farany” aorian’izay. (Andininy 3, 14) Anisan’izany famantarana izany ny hoe hisy ady mahatsiravina, mosary, horohoron-tany any amin’ny toerana samihafa, hihamaro ny mpandika lalàna, tsy hifankatia ny olona, ary hiezaka hamitaka ny olona ny mpitondra fivavahana. (Andininy 6-26) Marina fa efa nisy foana izany hatramin’izay, saingy hiaraka hitranga daholo izy ireo rehefa manakaiky ny farany. Ireto misy zavatra telo hafa hiseho miaraka amin’ireo:
2. LASA RATSY TOETRA NY OLONA Milaza ny Baiboly fa hiharatsy be mihitsy ny toetran’ny olona mandritra ny “andro farany”, izany hoe alohan’ny fara andro. Izao no voalaza ao: “Ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho matin-kambo, hanambony tena, ho mpanevateva, tsy hankatò ray aman-dreny, tsy hisaotra, tsy ho mena-mivadika, tsy ho tia ny mpianakaviny, tsy ho azo ifanarahana, ho mpanendrikendrika, tsy hahafehy tena, ho masiaka be, tsy ho tia ny tsara, ho mpamadika, ho be di-doha, ho mpieboebo, ho tia fahafinaretana fa tsy ho tia an’Andriamanitra.” (2 Timoty 3:1-4) Efa nisy foana ny tsy manaja olona hatramin’izay, fa vao mainka hiharatsy izany amin’ny “andro farany”, ka mety tsara ny iantsoana azy hoe “fotoan-tsarotra tsy mora setraina.” Tsy hitanao ve hoe tena lasa ratsy be mihitsy ny toetran’ny olona ankehitriny?
3. MIHASIMBA NY TANY Milaza ny Baiboly hoe ‘handringana izay manimba ny tany’ Andriamanitra. (Apokalypsy 11:18) Ahoana no hanimban’ny olona ny tany? Mitovy amin’izay nataon’ny olona tamin’ny andron’i Noa ihany. Hoy ny Baiboly: “Simba sy feno herisetra ny tany, teo imason’Andriamanitra. Koa hitan’Andriamanitra fa simba ny tany.” Nilaza toy izao àry izy momba an’ireo olona ratsy toetra ireo: “Haringako izy ireo.” (Genesisy 6:11-13) Tsy hitanao ve fa tena be dia be ny herisetra amin’izao? Manana fitaovam-piadiana mahery vaika koa ny olona ka mahavita mandringana tanteraka ny olombelona rehetra eto an-tany. Mbola tsy nisy an’izany mihitsy hatramin’izay. Ankoatra izany, dia tsy mahay mikarakara ny tany ny olona ka mihasimba ny tontolo iainana, izany hoe ny rivotra, ny biby, ny zavamaniry, ary ny ranomasina.
Eritrereto izao: ‘Nanana fitaovana nahavita nandripaka ny olona rehetra teto an-tany ve ny olombelona tamin’ny zato taona lasa?’ Vitan’ny olona anefa amin’izao ny manamboatra fitaovam-piadiana be dia be sady mahery vaika, sy ny manimba tanteraka ny tontolo iainana. Hita mihitsy hoe mandroso haingana be ny teknolojia, nefa tsy fantatry ny olona sady tsy voafehiny akory ny vokatry ny fampiasana azy. Raha ny marina, dia tsy anjaran’ny olombelona ny mandidy sy manapaka ny hoavin’ny tany fa an’Andriamanitra. Tsy havelany ho faty daholo ny olona eto an-tany, satria efa nampanantena izy fa handringana an’izay manimba ny tany.
4. MISY FITORIANA ATAO ERAN-TANY Anisan’ny famantarana ny andro farany ny hoe hisy asa miavaka iray atao eran-tany. Hoy ny Matio 24:14: “Hotorina maneran-tany ity vaovao tsaran’ilay fanjakana ity, ho vavolombelona amin’ny firenena rehetra, vao ho tonga ny farany.” Tsy mitovy amin’ny fitoriana nataon’ny ankamaroan’ny fivavahana nandritra ny taonjato maro io fitoriana io. Ny “vaovao tsaran’ilay fanjakana” no tena resahina mandritra ny andro farany. Ianao ve mahafantatra fivavahana mitory an’izany? Na misy aza izany, moa ve izy ireo fivavahana amin’ny toerana iray ihany, sa mitory ny vaovao tsara “maneran-tany” mba “ho vavolombelona amin’ny firenena rehetra”?
Torina maneran-tany amin’ny fiteny an-jatony izao ny Fanjakan’Andriamanitra
Ny “vaovao tsaran’ilay fanjakana” no tena hasongadin’ny tranonkala www.jw.org. Miresaka momba an’io Fanjakana io ireo boky sy gazety amin’ny fiteny 700 mahery hita ao. Ianao ve efa naheno hoe misy manao ezaka be hoatr’izany koa mba hitoriana ny vaovao tsaran’ilay Fanjakana maneran-tany? Mbola tsy nisy akory ny Internet, dia efa fantatry ny olona hoe manao izay azony atao ny Vavolombelon’i Jehovah mba hitoriana ny vaovao tsara momba ny Fanjakan’Andriamanitra. Efa nanomboka tamin’ny 1939 ny fonon’ny gazety Ny Tilikambo Fiambenana no nisy hoe “Manambara ny Fanjakan’i Jehovah.” Milaza ny boky iray momba ny fivavahana fa tsy misy mahavita mitory hoatran’ny ataon’ny Vavolombelon’i Jehovah satria sady mazoto be izy ireo no mitory any amin’ny tany maro. Io fitoriana io no hahalalan’ny olona an’ilay vaovao tsara hoe kely sisa dia “ho tonga ny farany”, rehefa hanao zavatra ny Fanjakan’Andriamanitra.
VANIM-POTOANA TENA MIAVAKA
Tsy hitanao ve hoe efa mitranga daholo ireo famantarana efatra noresahina tato amin’ity lahatsoratra ity? Efa zato taona mahery izao ity gazety ity no niresaka an’ireo zava-misy eran-tany ka nanampy ny mpamaky hahita fa efa tena akaiky ny farany. Misy ihany anefa ny tsy manaiky an’izany. Rehefa misy mitantara zavatra nitranga, hono, na manome antontan’isa dia azony amboamboarina izany. Satria koa, hono, mandroso be ny fifandraisan-davitra dia mora amintsika ny mahita an’ireo zavatra ratsy eran-tany ka lasa mihevitra isika hoe miharatsy ny fiainana, nefa tsy izany akory no izy. Mihabetsaka anefa ny porofo hoe miavaka izao vanim-potoana iainantsika izao.
Hitan’ny mpikaroka sasany fa kely sisa dia hisy fiovana lehibe eto an-tany. Nisy manam-pahaizana nampitandrina ny Firenena Mikambana, ohatra, tamin’ny 2014. Hoy izy ireo: “Rehefa nandinika izahay dia hitanay fa mety hampidi-doza ny fampiasana teknolojia, ka mety handripaka tanteraka ny olombelona.” Be dia be ny olona resy lahatra hoe miavaka ny fotoana iainantsika. Mino ny mpamoaka an’ity gazety ity sy ny mpamaky maro fa andro farany izao ary efa akaiky ny farany. Tsy mampahatahotra ny zavatra hitranga amin’ny hoavy fa mahafaly. Mety ho voavonjy mantsy ianao amin’io.
TSY MPAMINANY MILAZA LOZA
Tsy mpaminany milaza loza ny Vavolombelon’i Jehovah. Efa zato taona mahery izy ireo no nitory hoe ho tsara ny fiainana amin’ny hoavy. Izany, ohatra, no noresahina tamin’ny fivoriambe iray tamin’ny 1958, nandritra an’ilay lahateny hoe “Efa Mitondra ny Fanjakan’Andriamanitra, ka efa Akaiky ve ny Faran’izao Tontolo Izao?” Nohazavaina tao hoe: “Tsy hanapotika ny tany no hahatongavan’ny Fanjakan’Andriamanitra fa hanapotika ny tontolon’i Satana. Tsy handoro ny tany no hahatongavan’ny Fanjakan’Andriamanitra fa hanao ny sitrapon’Andriamanitra etỳ an-tany tahaka ny any an-danitra. Tokony harovana àry ny tany satria noforonin’Andriamanitra. Harovany mandrakizay ny tany.”